Mangamila Anjozorobe : mpianatra sivy vavy indray nihetsika ambalavelona | NewsMada
Tsy nijanona tany Morondava na Miandrivazo intsony ny resaka ambalavelona fa tonga hatrany Anjozorobe. Lasibatra indray ny tovovavy tany an-toerana.
Mpianatra sivy vavy no indray nihetsika an’ity aretina hafahafa ity tany Mangamila Anjozorobe. Manodidina ny 14 ka hatramin’ny 17 taona eo ireo, ka ny roa amin’ireo mpianatry ny lycée ary ny fito mpianatry ny CEG. Ny 8 febroary lasa teo no nitrangan’izany, ka voatery nakaton’ny zandary sy ny mpanabe ny sekoly, ny 10 ka hatramin’ny 12 janoary.
Mitovy tamin’ny endrika nisehoan’ny nahazo ireo ankizivavy tany Miandrivazo sy Morondava ihany ny manjo ireto tany Anjozorobe ireto, raha ny fanazavana. Mihinjikinjitra, miantsoantso ary torana avy eo. Sahirana ny ray aman-dreny nanoloana ny manjo ireo zanany. Manahy ny amin’ny mety hifindran’izany amin’ny ankizy hafa izy ireo. Anisan’ny nanakatonana ny sekoly andro vitsy izany. Tsaboina any amin’ny CSB II ireo ankizy marary ireo ary mbola manaraka fitsaboana hatramin’izao.
Maro ny mametra-panontaniana momba ity aretina miparitaka ity. Iza no manao azy, avy aiza? Raha ny tany Miandrivazo aloha, ny Kohen Rivolala no voampanga nanao izany, ary efa any am-ponja izy io amin’izao fotoana izao. Ity farany izay nalaza fa nanaparitaka io aretina io tamin’iny faritra iny. Saika niafara tamin’ny rotaka sy fitsaram-bahoaka mihitsy izany, nandritra ny fisamborana azy ity tany Miandrivazo. Na any am-ponja aza anefa izy mbola nisy ny nihetsika aretina, ary izao any Anjozorobe izao indray.